महानायक हमालको आज जन्मदिन, के प्रेमगीत ३ मा काम गर्दै छन् ? « Mazzako Online
महानायक हमालको आज जन्मदिन, के प्रेमगीत ३ मा काम गर्दै छन् ?
महानायक राजेश हमालको आज जन्मदिन। आधा शताब्दी नाघिसकेका उनी केहि समयदेखि चलचित्रमा देखिएका छैनन्। प्राय रियालिटी शोमा नै आफुलाई व्यस्त राख्दै आएका महानायकको क्रेज बढ्दो हो या घट्दो? धेरै चलचित्रमा काम गरेर लोकप्रिय बनेका उनी नायकको नि नायक बन्दै महानायक बने। कुनै समय थियो, उनको टाउको मात्रै पनि पोस्टरमा राख्यो भने फिल्म सुपरहिट हुन्थ्यो।
तर, समयको गतिसङ्गै र नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बिकास र विस्तार सङ्गै धेरै नयाँ अनुहार आए र बिस्तारै पुरानो पुस्तालाई हटाउदै आफ्नो क्रेज बनाए। कथावस्तु र चरित्रमा पनि परिवर्तन देख्न थालियो र पुराना कलाकार हराउदै गए। महानायक राजेश हमालको क्रेजपनि चलचित्र क्षेत्रबाट अलि अलि गर्दै केही हदसम्म खस्कियो । उनी त्यसपछि आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा नै हराउन र रमाउन थाले। उनी विभिन्न रियालिटी शो होस्ट गर्न थाले।
अहिले उनी को बन्छ करोडपतिको नेपाली संसकरणलाई होस्ट गर्दै छन्। कुनैबेला महानायकको कुन चलचित्र आउँछ भनेर पर्खिने दर्शक अहिले उनी कुन अर्को कार्यक्रममा सन्चालकको रूपमा देखिने होलान् भनेर चासो गर्न थालेका छन्। यसरी हेर्दा उनको चर्चा अहिले अलि फरक ढंगले भईरहेको छ। चलचित्रमा पनि उनले काम गर्ने भन्ने पनि सुनिदै आएको कुरा हो। चलचित्र प्रेमगीत ३ मा पनि उनले अभिनय गर्ने कुरा पनि छ तर आधिकारिक रूपमा यो कुरा पुष्टि छैन। महानायकले फिल्म नखेले पनि फिल्म बनाउन त पर्छ नि भन्ने पनि धेरै छन्।
अझ उनीभन्दा धेरैपछि आएकाले फिल्म मेकिङ्गमा राम्रो सफलता पाईरहेको बेला उनी किन चलचित्र अभिनय र मेकिङ्गमा मौन छन्? यसको जबाफ त उनैले दिन पर्छ। महानायकलाई दर्शकले चलचित्रमा अभिनय गरेको हेर्न पक्कै खोजेका छन् ।
मिडियाले पनि अहिले उनलाई खोजिरहेकै छन् । उनको क्रेज अहिले बढ्दो नै छ तर उनले यसलाई बुझेका छन् कि छैनन्? बुझेका भए त पक्कै चलचित्रमा फर्किन्थे होला कि?